Bank at Home - Yoma Bank
Link your SMART Account and WavePay Account digitally and easily from your smartphone and have access to all WavePay Features together with Yoma Bank Mobile Banking Features.
Wave Shops: Access to thousands of Wave Shops Across Myanmar
Transact: Transfer/Receive anyone, anywhere via WavePay App
24/7 Online Banking: Bank anywhere anytime
Withdraw/Deposit: Withdraw from your SMART Account, or Deposit to your SMART Account via WavePay App without requiring to go the branches.
မိမိရဲ့ Yoma Bank SMART အကောင့်နှင့် Wave Pay အကောင့်ကို ဖုန်းကနေ ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်ပြီး WavePay နှင့် Yoma Bank- Mobile Banking Application ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းတစ်ခုတည်းနဲ့ ငွေသွင်းငွေထုတ်၊ ငွေပေးချေမှုများကို လုပ်နိုင်ရုံသာမက မြန်မာပြည်အနှံ့ရှိ Wave ဆိုင်ပေါင်း များစွာမှာလည်း အဆင်ပြေ လွယ်ကူစွာ ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Wave Shops: မြန်မာပြည်အနှံ့ရှိ Wave ဆိုင်ပေါင်း များစွာတွင် အဆင်ပြေ လွယ်ကူစွာ ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
Transact: မည်သူ့ကိုမဆို မည်သည့် နေရာတွင်မဆို ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
24/7 Online Banking: ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်ခြင်း
Withdraw/Deposit: WavePay App မှတစ်ဆင့် SMART အကောင့်မှ ငွေထုတ်ခြင်း SMART အကောင့်သို့ ငွေထည့်ခြင်း
Yoma Bank (Personal) Mobile Banking services
Banking has never been easier with our Mobile Banking app. Check your balance, make transfers, pay bills and access many other services without visitingaphysical branch. The all-inclusive Yoma Bank Digital Banking app lets you bank anytime, anywhere.
Check balance & Transaction History: Monitor the amount and history of all of your accounts fromasingle, digital location and get bank statements via Online Banking.
Online Transfers: Digitally transfer money between your accounts, to Wave or to another Yoma Bank SMART account for free.
Create fixed deposit: via Mobile Banking app
Mobile Top-Up Bonus: Enjoya4% discount when you top up with MPT, Ooredoo, Tenenor or Mytel using your SMART Account
ရိုးမဘဏ်၏ Mobile Banking application ကိုအသုံးပြုပြီး ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အလွယ်ကူဆုံး ရယူနိုင်ပါပြီ။ ငွေလက်ကျန် စာရင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းနှင့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုများကို ဘဏ်ခွဲသို့ သွားရောက်ရန် မလိုဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။
ငွေလက်ကျန်စာရင်းနှင့် ငွေထုတ်ငွေသွင်း စာရင်းကို စစ်ဆေးခြင်း ရိုးမဘဏ် အပ်ငွေစာရင်းအားလုံး၏ ငွေကြေးလည်ပတ်မှုကို တစ်နေရာတည်းမှ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်ပါပြီ။
အွန်လိုင်းမှ ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း လူကြီးမင်း၏ ရိုးမဘဏ် အကောင့်အချင်းချင်း သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းအကောင့်မှ အခြားသူ၏ ရိုးမဘဏ် SMART အကောင့်ထဲသို့ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ငွေလွှဲနိုင်ပါသည်။
ငွေပေးချေခြင်း SMART အကောင့်မှတစ်ဆင့် ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းများနှင့် မိမိအဆင်ပြေသောအချိန်ဇယားအတိုင်း အလိုအလျောက်ငွေပေးချေရန် အချိန်သတ်မှတ်ထားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
With SMART MPU card, you can enjoy free cash withdrawals at Yoma Bank ATMs and up to five free cash withdrawals per month from other ATMs with the MPU logo.
Shop at any MPU point-of-sale location or online retailer.
SMART MPU Debit Card ကို အခမဲ့ရယူပြီး ရိုးမဘဏ် ATM များတွင် ဝန်ဆောင်ခ အခမဲ့ ငွေထုတ်ယူနိုင်သကဲ့သို့ အခြား MPU တံဆိပ်ပါ ATM များတွင်လည်း တစ်လလျှင် အများဆုံး ငါးကြိမ်အထိ ဝန်ဆောင်ခ ပေးရန်မလိုဘဲ ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
MPU လက်ခံသည့် မည်သည့်ဆိုင်နှင့် အွန်လိုင်းဆိုင်များတွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
In case you have to visitaYoma Bank branch ?
To avoid crowd and spending your precious time waiting to be served, you can now book through booking.yomabank.com selecting the preferred time and branch.
No need to wait for long queue.
Will be served faster
ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူမည့် ရိုးမဘဏ် Customers များအနေဖြင့် ဘဏ်ခွဲများတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းရမှုများမှ ကင်းဝေးစေရန် booking.yomabank.com မှတစ်ဆင့် မိမိ အဆင်ပြေမည့် ရက်နှင့်အချိန်၊ သွားရောက်လိုသည့် ဘဏ်ခွဲများကို ကြိုတင် Booking ပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ဘဏ်ခွဲတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းရမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်း
ကြိုတင် Booking ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် မိမိအချိန်ကုန်သက်သာခြင်း
Contact Tracing For the purpose of COVID-19 Contact Tracing, we require all customers to fill in their contact Information.
Social Distancing and hygienic measures at Branches We have also taken the social distancing and hygienic measures at our braches to maintain the safe environment both for our customers and employees.
Contact Tracing Covid -19 ရောဂါကို ကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဘဏ်ခွဲများသို့ လာရောက်သော Customer များ၏ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များကို Contact Tracing အနေဖြင့် ကောက်ခံလျက်ရှိပါသည်။ ဘဏ်ခွဲများတွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကွာအဝေး (Social Distancing) ထားရှိခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် သန့်ရှင်းမှု အစီအမံများ ထားရှိခြင်းများပြုလုပ်ထားပါသည်။
ရိုးမဘဏ်အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဖောက်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကွာဝေး(Social Distancing) ထားရှိခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် သန့်ရှင်းမှုအစီအမံများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။